/ Products / Anterolics steroids / Taxanaha budada ah ee testosterone / Oxymetholone (Anadrol) budada
2.75 ka mid ah 5 ku saleysan 4 ratings macaamiisha
SKU: 434-07-1. Categories: Taxanaha budada ah ee testosterone, Anterolics steroids
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee Oxymetholone (Anadolus) (434-07-1), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka kantaroolka tayada la socon karo.
Oxymetholone (Anadrol) budada waxaa laga helaa isticmaalka ugu caansan ee cayaaraha iyo dhisayaasha dhismayaasha saameyno badan oo ay bixiso taas oo kicinaysa tijaabooyinka dheeri ah ee testosterone. Hooska miisaanka, budada Anadrol waxaa loo maleynayaa in miisaankeedu yahay daroogada. Marka lagu daro kordhinta rabitaanka cuntada, waxay sidoo kale gacan ka gaysatay helitaanka xoogga iyo sidoo kale tirada unugyada dhiigga cas.
Dib u eegida (4)
Oxymetholone (Anadrol) video budada ah
Kalluunka Oxymetholone (Anadrol) budada Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Oxymetholone (Anadrol) budada
Miisaankani waa: 332.48
Dhibcaha Biyaha: 172-180 ° C
Isticmaalka budada Oxymetholone (Anadrol) ee wareegga steroid
Daawada Oxymetholone waxaa sidoo kale loo yaqaanaa budada Anadol, A-bam iyo A50.
Isticmaalka budada Oxymetholone
Ku darida budada Anadol ee 50 mg / maalin Dianabol wax yar oo faa'iido leh ayaa lagu daraa wareegga steroidka; Taas bedelkeeda, marka lagu daro budada Anadol ee 50-100 mg / day trenbolone acetate ama 60-80 mg / day Anavar (oxandrolone) waxay siisaa horumarin fara badan.
Isticmaalka caadiga ah waa 50-150 mg / maalin. Xaaladaha qaarkood marar badan sida 300 mg / maalin ayaa la isticmaalaa, laakiin marka ay ku haboon tahay hal ama dhowr waxyaabood oo kale oo ah anabolic steroids, badanaa waxaa jira faa'iido dheeraad ah oo ka badan xaddiga 150 mg / maalin.
Digniin ku saabsan budada Oxymetholone
Dhibaatooyinka ka yimaada budada Anadrol ayaa sidoo kale si tartiib ah u tagi doona marka la isticmaalo. Waa maxay sababta ay daroogada u dhibayso haddii saameyntu ay si tartiib ah u tagayaan? Waa hagaag, budada Anadrol ayaa cajiib ah sida kor u qaadista ku meelgaarka ah si aad u wanaajiso kartidaada inta aad sugeyso xeryaha kale ee kordhinta xeryahooda si ay u bilaabaan. Waxay kugu qaadataa wakhti waxayna kuu ogolaaneysaa inaad bilowdo hawshaada 100% intii aad ku qaadan lahayd todobaad ama bilo si tartiib ah galaya.
Saameynaha budada Noolaha ayaa kala duwanaan kara qof ahaan, laakiin sida caadiga ah waxay raacaan wadada soo socota. Waxaad ogaan doontaa guulaha aadka u fiican ee kuugu horeeya ee toddobaadyada 3 ee isticmaalka dheeraadka ah. Dhibaatooyinka ayaa guud ahaan heerkulbeegaya kadib. Si loo yareeyo suurtagalnimada dhibaatooyinka soo raaca, u fiirso si taxadar leh qiyaasta qiyaastaada.
Nadiifinta budada ah
Suugaanta Oxymetholone Powder Market
Sida loo iibsado budada Oxymetholone; iibso budada Anadol laga bilaabo AASraw
AASraw waxay bixisaa nadiif ah 98% Oxandrolone / Anavar budada cayriin ah oo loogu talagalay jirka jirka ama sheyaalka dhulka hoostiisa isticmaalka afka.
Root Anadol farmaajo:
4 dib loogu talagalay Oxymetholone (Anadrol) budada
Oxymetholone (Anadrol) budo ah waa mid dahsoon
Ma u diri kartaa viagra in uk ah?
qiimeeyay 2 out of 5
Anigu waxaan kaliya websaydhayaa, oo waxaan helay qodobkan cajiibka ah.you guys run ahaantii shaqo aad uwanaagsan, articles kuwan webka waa cajiib ah, halkan ayaan halkan u yimaadaa si aad u ogaato wax badan
Xaawa - 11 / 18 / 2018
Blog cajiib ah oo ku saabsan anadrol! Ma leedahay wax talooyin ah oo ku saabsan qorayaasha soo jiidashada leh?
Waxaan rajeynayaa inaan billaabi karo blog-kiisa laakiin wax yar ayaan ku lumayaa wax walba.
Miyaad kugula talin lahayd inaad bilawdo bilaash ah sida WordPress ama aad u bixiso lacag
doorasho? Waxaa jira fursado badan oo aan halkaas ku heli karo oo dhan
jah wareeriyey, ma ogaan karaa sida aad u sameysay taas. Waad mahadsan tahay!
Mastasteron (Superdrol) budada